प्रतिनिधि सभाको बैठक आज : बजेट पास होला ? - Dainik Online Dainik Online
प्रतिनिधि सभाको बैठक आज : बजेट पास होला ?
प्रकाशित मिति : २९ भाद्र २०७८, मंगलबार ७ : ३२
मंगलबारको सम्भावित कार्यसूचीमा अर्थमन्त्री शर्माले ‘विनियोजन विधेयक, २०७८ माथि विचार गरियोस्’ भनि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने उल्लेख छ । तर एमाले हरेक बैठकमा वेल घेर्दै आएको छ । आइतबारको संसद बैठक पनि एमालेको अवरोधका कारण अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।
एमालेले पछिल्लो पटक दुई वटा सर्त अघि सारेको छ । एमालेले कारबाही गरेका १४ सांसदको सूचना टाँस गर्नुपर्ने वा सभामुख सापकोटाले मार्ग प्रसस्त गर्नुपर्ने । तर, कारबाही विषयको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले यसबारे संसदमा टिप्पणी गर्न नमिल्ने धारणा सभामुख सापकोटाको छ ।